QubeyskaSundsta – waa meel si dheeraad ah oo qubeyska dareenka leh
Waqtiyada uu furan yahay/Öppettider
Dadka waaweyn ayaa ka mas`uul ah caruurta nabadgelyadooda/Vuxnas ansvar för barns säkerhet
Sidaan ayaa loogu talagalay meesha dabaasha ee Sundsta/Så här funkar det på Sundstabadet
QubeyskaSundsta – waa meel si dheeraad ah oo qubeyska dareenka leh
Ma rabtaa inaad ciyaarto,tababar sameyso ama raaxeysi? Meesheena qubeyska Sundsta ee Karlstad uma baahnid inaad doorato. Kusoo dhawoow qalbi furan!
Qubeyska Sundsta waa meel cusub oo lagu dabaasho taasoo dadkoo dhan ay wax ka heli karaan: dhalinyaro sidoo kale da`,ciyaar badan ama degen, macaamil joogto ama marti ku meel gaar ah. Meeshaan dabaasha kala gedisan waxaad ka dareemeysaa farxad qabilgaaga iyo calooshaada da`daa doonto jir. Ma rabtaa inaad tababar sameyso waxaa ku yaala seddax meel oo lagu dabaasho iyo meel casri ah oo jimicsiga lagu sameeyo. Meesheena sare ee raaxeysiga waa meel degen oo ay biyo ku jiraan taaso ku yaala qolka leysku dhaqo, Qubeyska dareenka leh,meel biyaha ay kasoo baxayaan iyo kululeysada.Halkaan waa meel aad si dheeraad ah ugu raaxeysaneyso– cabitaan cusub oo lasoo miiray,cunto macaan iyo meel la fariisto oo ku sii jeeda meel qurux leh.
Meelaha waaskooyinka kala gedisan
Qubeyska dareenka leh waa meel aad ka heli karto farxad niyad leh da`daa doonto jir. Meeshaan waxaa ku yaala laba tubo oo lagu fariisto oo aad u fiican, buuro hoostood oo ay biyo ku jiraan, meel biyo oo laga soo boodaayo, darbi la koro, meel guriga banaankiisa oo lagu dabaasho oo leh hirar iyo meel ilmaha yar -yar ay ku dabaashaan oo leh biyo kulul. Iyadana waxaa ku taala biibito wax lagu gado qof walboo jecel inuu sii ciyaaro wuxuu sameyn karaa inuu caloosha buuxsado. Waxaan idinkula talileynaa dadkiina raba iney raacaan tubooyinka la raaco ee biyaha in loogu talagalay wixii 7 sano ka weyn iney raaci karaan.
Meelaha waaskooyinka iyo jimicsiga
Adiga ma dooneysaa inaad tababar sameyso waxaa ku yaala seddex meel oo lagu dabaasho iyo meel lagu jimcsado oo casri ah.Meelaha lagu dabaasho waxaan kugu martiqaadeynaa,marka laga saaro meelo badan oo lagu dabaalan karo adiga raba inuu dabaasho,dhaqdhaqaaqyo kala duwan,kuwaasoo ay ka mid yihiin biyaha lagu jimicsado,naaga uurka leh meel ay ku dabaashaan,ilmaha markii ay yar yihiin meel ay ku dabaalan karaan,jamneestikada biyaha iyodabaasha dadka waaweyn oo dabaal lugaha laga shaqeysiiyo.
Qaybta lagu raaxeysto
Qaybteena raaxeysiga waa meel biyahaas ay yihiin kuwa meel kasoo baxay oo doog leh oo aad ku raaxeysan karto,jirkaagu uu dareemayo iyo adiga iyo saaxibadaa oo kuwada kulmi kara. Halkaan waxaa laguugu martiqaadayaa dabaalashada kala gedisan taasoo ay kuu sii dheer tahay carafta liinta- iyo udugyo kala duwan oo meesha leysku kululeeyo, ku raaxeysto meesha leysku rugo taasoo leh dhagaxa weyn ee marmarka kaasoo xaraarada kuleylkiisa la gaarsiiyey 50 darajo ama meesha kululeysada ee lagu dhidido. Qolka qoraxda waxaad ka heleysaa madaabaad kaasoo lagu daawoobo iftiinka kaasoo leh dhawaaqyyada hirarka kuna sii jeeda biya dhaca webiga vänern. Dareenkaas qubeysyadana waxaa dhinac yaala doorashada dhulalka kuleylaha roobabkooda ama baaldi ay ku jiraan biyo qabow oo baraf noqday. Markaad kasoo baxeyso meesha kulul oo geedaha lagu shiday waxaad si toos ah u soo galeysa meesha biyaha lakululeeyey ee guriga banaankiisa,taaso ku sii jeeda xidigaha sundsta. Qaxwada hoos waxaa miiska la soo saaraa cunto dhadhan leh iyo cabitaan lasoo miiray. Qaybta raaxeysashada waxaad hore u soo wadan kartaa dadka aad isla shaqeysaan ama macaamilkaaga taasoo ka duwan kuwa kale sida shirka shaqada ama maalin barkeed muxaafado la gashan yahay dharka la xerto marka la qubeysto.